မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း (သို့) အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက် – Gentleman Magazine
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း (သို့) အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်
အခုခေတ်ကာလမှာ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းလုပ်တတ်ကိုင်တတ်ပြီး လူသိများတဲ့ စွန့်ဦးလူငယ်တွေများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတာဟာ ဘယ်လိုများအရေးပါသလဲလို့ တွေးမိပါသလား။ တကယ်တော့ ဒီအချက်ဟာ အများစုမှာ လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရလည်း မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်သူတွေဟာ ပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပြီး တစ်ဦးချင်းမှာရော အသင်းအဖွဲ့လိုက်မှာပါ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ ? နှိမ့်ချတတ်ခြင်းကို အများစုက သိမ်ငယ်ခြင်းနဲ့ မှားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာ သင့်ကိုသင် အထင်မကြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သိမှတ်ရှုမြင်တတ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ခြင်း၊ ကြင်နာတရားရှိခြင်းတွေနဲ့လည်း ပတ်သက်နေပါတယ်။ နှိမ့်ချတတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားကြသလို ဘ၀င်မမြင့်ပဲ ယုံကြည်မှုရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယူသန်ခေါင်းမမာတတ်ပဲ စိတ်ထားပွင့်လင်းကြပါတယ်။ အလျှော့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ထောက်ပံ့ကူညီတတ်ကြပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ ထူးခြားချက်ဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထက် နှိမ့်ချတတ်ခြင်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စွန့်ဦးလူငယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ နှိမ့်ချခြင်းသုံးခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ရိုကျိုးစွာ နားထောင်တတ်ခြင်း
နားထောင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ ရိုရိုကျိုးကျိုးနားထောင်တတ်တာဟာ အခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လေးစားသမှုနဲ့ လက်ခံပေးတတ်တာကို ပြသပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်သူတွေဟာ ဖောက်သည်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းထံက သဘောထားထင်မြင်ချက်ကို လေးလေးနက်နက် နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ သစ္စာရှိမှုကို တည်ဆောက်နိုင်သလို ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နှိမ့်ချတတ်သူတွေဟာ ဘယ်အရာကိုမှ ချက်ချင်း အမှန်လို့ မယူဆတတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကို အသုံးချပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို အမှန် အမှား စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို အမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးတာက အရမ်းကြီးအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘယ်ဟာက အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်ဟာက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။။
လူဆိုတာ မှားတတ်ပါတယ်။ အမှားကိုဝန်ခံတတ်တာက နှိမ့်ချခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုက အမှားကိုဝန်ခံတာကို ပျော့ညံ့မှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အမှားကို ၀န်ခံတာဟာ ယဉ်ကျေးမှုရှိ၊ သဘောထားကြီးပြီး ပါးနပ်မှုရှိသူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားကို ၀န်ခံတတ်ပြီး အကူအညီတောင်းတာက သင်ယူလေ့လာလိုစိတ်ရှိပြီး အခြားသူတွေကို နေရာပေးတတ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခခြွငျး (သို့) အောငျမွငျမှုအတှကျ လိုအပျခကျြ
အခုခတျေကာလမှာ ဟောဟောဒိုငျးဒိုငျးလုပျတတျကိုငျတတျပွီး လူသိမြားတဲ့ စှနျ့ဦးလူငယျတှမြေားစှာ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ မိမိကိုယျကိုနှိမျ့ခတြာဟာ ဘယျလိုမြားအရေးပါသလဲလို့ တှေးမိပါသလား။ တကယျတော့ ဒီအခကျြဟာ အမြားစုမှာ လိုအပျနတောဖွဈပါတယျ။ မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခတြတျခွငျးဟာ အောငျမွငျမှုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရလညျး မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခတြတျသူတှဟော ပိုပွီးအစှမျးထကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှဖွေဈကွပွီး တဈဦးခငျြးမှာရော အသငျးအဖှဲ့လိုကျမှာပါ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားကွတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခတြတျတယျဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးပါလဲ ? နှိမျ့ခတြတျခွငျးကို အမြားစုက သိမျငယျခွငျးနဲ့ မှားတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ နှိမျ့ခတြတျခွငျးဟာ သငျ့ကိုသငျ အထငျမကွီးခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ သိမှတျရှုမွငျတတျခွငျး၊ မိမိကိုယျကိုနားလညျခွငျး၊ ကွငျနာတရားရှိခွငျးတှနေဲ့လညျး ပတျသကျနပေါတယျ။ နှိမျ့ခတြတျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှဟော သူတို့ရဲ့အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရိုးသားကွသလို ဘဝငျမမွငျ့ပဲ ယုံကွညျမှုရှိတတျကွပါတယျ။ တဈယူသနျခေါငျးမမာတတျပဲ စိတျထားပှငျ့လငျးကွပါတယျ။ အလြှော့ပေးတာမြိုးမဟုတျပဲ ထောကျပံ့ကူညီတတျကွပါတယျ။
ခေါငျးဆောငျကောငျးတှရေဲ့ ထူးခွားခကျြဟာ ကိုယျရညျကိုယျသှေးထကျ နှိမျ့ခတြတျခွငျးပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ စှနျ့ဦးလူငယျတဈယောကျပဲဖွဈဖွဈ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှမှော လိုအပျတဲ့ နှိမျ့ခခြွငျးသုံးခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ရိုကြိုးစှာ နားထောငျတတျခွငျး
နားထောငျခွငျးဟာ အောငျမွငျသူတိုငျးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတညျရှိပါတယျ။ ရိုရိုကြိုးကြိုးနားထောငျတတျတာဟာ အခွားသူတှရေဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို လေးစားသမှုနဲ့ လကျခံပေးတတျတာကို ပွသပါတယျ။ မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခတြတျသူတှဟော ဖောကျသညျတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးထံက သဘောထားထငျမွငျခကျြကို လေးလေးနကျနကျ နားထောငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုနညျးလမျးနဲ့ ဖောကျသညျတှရေဲ့ သစ်စာရှိမှုကို တညျဆောကျနိုငျသလို ၀နျထမျးတှရေဲ့ စိတျဓာတျကိုလညျး မွှငျ့တငျပေးနိုငျပါတယျ။
နှိမျ့ခတြတျသူတှဟော ဘယျအရာကိုမှ ခကျြခငျြး အမှနျလို့ မယူဆတတျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ပငျကိုယျသိစိတျကို အသုံးခပြွီး ထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို အမှနျ အမှား စဈဆေးလရှေိ့ပါတယျ။ ထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို အမှနျဟုတျမဟုတျစဈဆေးတာက အရမျးကွီးအကြိုးသကျရောကျဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘယျဟာက အလုပျဖွဈတယျ၊ ဘယျဟာက အလုပျမဖွဈဘူးဆိုတာ သိရုံနဲ့လုံလောကျပါတယျ။။
လူဆိုတာ မှားတတျပါတယျ။ အမှားကိုဝနျခံတတျတာက နှိမျ့ခခြွငျးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အမြားစုက အမှားကိုဝနျခံတာကို ပြော့ညံ့မှုရဲ့လက်ခဏာတဈခုအဖွဈ သတျမှတျတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ အမှားကို ၀နျခံတာဟာ ယဉျကြေးမှုရှိ၊ သဘောထားကွီးပွီး ပါးနပျမှုရှိသူတှရေဲ့လုပျရပျဖွဈပါတယျ။ အမှားကို ၀နျခံတတျပွီး အကူအညီတောငျးတာက သငျယူလလေ့ာလိုစိတျရှိပွီး အခွားသူတှကေို နရောပေးတတျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ယုံကွညျမှုကို တညျဆောကျပွီးသားလညျး ဖွဈသှားစပေါတယျ။
မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခတြတျခွငျးဟာ အောငျမွငျမှုအတှကျ စှဲမကျစရာကောငျးတဲ့ အမူအကငျြ့တဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အမှနျတကယျလိုအပျတဲ့အရာဖွဈပါတယျ။
Previous: ဘီလီယံချီတန်သည့် စိတ်ကူးများ
Next: ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်ဖို့ လှည့်ကွက်တစ်ခု